कोरोना विरुद्धको खोप बाँदरमा सफल, मानिसमा परीक्षण गरिदै - ePosttimes
Homeविश्वकोरोना विरुद्धको खोप बाँदरमा सफल, मानिसमा परीक्षण गरिदै
१२ बैशाख २०७७, शुक्रबार १२:३२ विश्व, स्वास्थ्य, हाम्रो सरोकार 0
एजेन्सी / चीनको एक बायोटेक कम्पनीले बनाएको खोपले बाँदरलाई कोरोना भाइरसबाट बचाएको छ । त्यस कम्पनीले बनाएको कोरोनाविरुद्धको खोप बाँदरमा परीक्षण गर्दा सफल भएको जनाइएको छ ।
बेइजिङस्थित सिनोभ्याक बायोटेक कम्पनीले बाँदरमा गरिएको परीक्षण सफल भएको जनाएको हो । सिनोभ्याकका अनुसन्धानकर्ताहरूले दुई भिन्न किसिमका खोप आठवटा बाँदरमा प्रयोग गरेका थिए । त्यसको तीन हप्तापछि ती बाँदरको फोक्सोमा कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) राखिएको थियो ।
दुवै किसिमबाट बाँदरहरूमा भाइरस नियन्त्रण ल्याउन सफल भएसँगै १६ अप्रिलमै कम्पनी र अनुसन्धानकर्ताहरूले मानिसमा पनि खोप परीक्षण सुरु गरिसकेका छन् । र, परीक्षणकाे नतिजा भने आइसकेको छैन, आउने क्रममा छ ।
यस्तै ६ अन्य खोपहरू मानिसमा परीक्षण भइसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । करिब ७७ खोपहरू अझै विकासका क्रममा छन् । सिनोभ्याकले बनाएको खोप कोरोना भाइरसलाई संक्रमण निष्क्रिय पारेर बनाइएको हो ।
बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले पनि बिहीबारबाट मानिसमा खोप परीक्षण सुरु गरिसकेको छ । (एजेन्सी)
331800cookie-checkकोरोना विरुद्धको खोप बाँदरमा सफल, मानिसमा परीक्षण गरिदैyes
कोरोना भाइरसबारे थाहा पाउनु पर्ने ९ तथ्य सामग्री यस्तो छ कोरोना भाइरस मानिसले बनाएको हो ? गर्मी लागेपछि यो भाग्छ ? भ्रम र यथार्थ नोबेल अस्पतालद्वारा उपचारमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीईको व्यवस्था कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीबाट १८ लाख ४८ हजार संक्रमित, एक लाख १४ हजारको मृत्यु सुदूरपश्चिममा तीन हजारको -यापिड टेष्ट, रिपोर्टमा काेराेना संक्रमण देखिएन हतुवागढी भोजपुरका कोरोना संक्रमित यूवा बिराटनगर ल्याउने तयारी हुदैँ, भोलि मुख्यमन्त्री शेरधन राई स्वास्थ्य सामग्री सहित हतुवागढी आउदै झापामा थप एक जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि धरान उपमहानगरपालिकाको उपमेयर सहित उनको सबै परिवारको रिपोर्ट नेगेटिभ